पाकिस्तानले भारतलाई किन दियो यस्तो चेतावनी ? « Janata Samachar
पाकिस्तानले भारतलाई किन दियो यस्तो चेतावनी ?
प्रकाशित मिति : 14 January, 2018 1:57 pm
एजेन्सी । पाकिस्तानले भारतलाई सैन्य कारबाहीको धम्की नदिन चेतावनी दिएको छ । भारतीय सेनाध्यक्ष विपिन रावतले पाकिस्तानभित्र पसेर आक्रमण गर्न पनि पछि नपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि पाकिस्तानले भारतलाई सैन्य कारवाहीको धम्की नदिन चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले आदेश दिएमा पाकिस्तानी सीमा भित्रै पसेर आक्रमण गर्न भारतीय सेना तयार रहेको रावतको भनाई छ । पाकिस्तानका विदेश मन्त्री ख्वाजा आसिफले ट्विटरमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय सेनाध्यक्षको भनाईको आलोचना गरेका छन् ।
उनले भारतीय सेनाध्यक्षले गैर जिम्मेवार पूर्ण बयान दिएको र यस बयान परमाणु आक्रमणलाई निमन्त्रणा गर्नुसरह भएको भनि ट्वीट गरेका छन् । यदि भारतले त्यही चाहेको हो भने पाकिस्तान तयार रहेको जनाएका छन् ।
त्यसैगरी जवाफमा पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले पाकिस्तानको सरकारी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै भारतले के गर्छ भन्ने कुरा उसैमा भर पर्छ, तर भारतले पाकिस्तानको धैर्यको परीक्षा लिन चाहेको हो भने भारतले चाहेको गर्दा हुने तर त्यसको परिणामका लागि भारत तयार रहनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । गफुरले भारतको धम्कीबाट पाकिस्तान नडराउने प्रष्ट पारे ।
महतोको कार्यकाल सकियो, संयोजकमा यादवको तयारी
तस्वीर फाइल काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलको बैठक शुक्रबार (आज) बस्दैछ ।
डा.केसीपछि थापालाई पनि हेलिकोप्टरमा काठमाडौं ल्याइँदै
काठमाडौं । चिकित्सा विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी हुबहु अनुमोदन गर्नुपर्नेलगायत मागसहित इलाममा विगत आठ दिनदेखि
८ कक्षा फेल भएका युवा कसरी बने अर्बपति ?
काठमाडौं । मानिसको आँट र सकारात्मक सोच हुने हो भने विश्वमा कुनैपनि काम गर्न मुश्किल
मन्दिर धाउँछ पाप पखालुँ भन्छ